काठमाडौँ, २ कात्तिक : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बालमन्दिरका बालिकालाई आज गुन्यूचोलो प्रदान गर्नुभयो ।
लक्ष्मीपूजाको अवसर पारेर राष्ट्रपति भण्डारीले ६ देखि १६ वर्षका ४३ बालिकालाई गुन्यूचोलो प्रदान गर्नुभएको हो ।
कार्यक्रममा बालबालिका संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाका प्रमुख, प्रतिनिधि तथा संसद्को महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जु कुमारी झा, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्याल लगायतको सहभागिता थियो । (रासस)
बाकसबाटै गायव २२१ मत !
झलनाथको प्रश्न, “प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण सफल भन्ने ऋषि धमलाबाहेक अरु को छ ?”
पुष्पा खनालले ल्याईन आमाको सम्झनामा कारुणीक गीत
कांग्रेसमा देउवाविरुद्ध को-को जुटदैछन् घेराबन्दीमा ?
मेलामा आएका भारतीयसहित दुईको मृत्यु